သင့်လက်သည်းများကို အံ့သြဖွယ်ကောင်းအောင်အကျိုးရှိစေမယ့် အိမ်သုံးကုထုံး ၁၀ မျိုး - ONE DAILY MEDIA
သင့်လက်သည်းများကို အံ့သြဖွယ်ကောင်းအောင်အကျိုးရှိစေမယ့် အိမ်သုံးကုထုံး ၁၀ မျိုး
သုတေသနပြုချက်အရ လူ့လက်သည်းများသည် မြင်းခွာများကဲ့သို့ သန်မာပါတယ်။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် လက်သည်းများ ကွဲအက်ခြင်းသည် အဖြစ်များသော ပြဿနာဖြစ်ပြီး ခြောက်သွေ့ခြင်း၊ အစိုဓာတ် အလွန်အကျွံများခြင်း၊ လက်သည်းဖျက်ဆေး အလွန်အကျွံ အသုံးပြုခြင်း စသည်တို့ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ ကံကောင်းစွာဖြင့် အလှပြင်ဆိုင်သို့ မသွားဘဲ သင်အလိုရှိသော လက်သည်းအစုံကို ကျန်းမာလှပအောင် ကူညီပေးနိုင်သည့် ရိုးရှင်းသော သဘာဝဆေးနည်းများစွာ ရှိပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏စာဖတ်သူများအတွက် ဤကုထုံးများထဲမှ အချို့အကြောင်း သိရှိထားသမျှကိုအောက်တွင် ဖော်ပြပေးပါမယ်။
1. သခွားသီးကို လိမ်းပေးပါ။
သင်သည် လက်သည်းများ မကြာခဏ ကြွပ်ဆတ်ခြင်းကို ခံစားရပါက သခွားသီးကို လိမ်းခြင်းဖြင့် ပြဿနာကို သဘာဝအတိုင်း ဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်။ ၎င်းတွင် ဗီတာမင် A၊ E၊ B1၊ B2၊ B3 နှင့် C ကြွယ်ဝရုံသာမက ကယ်လ်စီယမ်နှင့် သံဓာတ်ပါရှိပါတယ်။ သင့်လက်သည်းများကို သခွားသီးဖျော်ရည်တွင် ၅ မိနစ်ကြာ စိမ်ထားပါ။
2. Vicks VapoRub ကို အသုံးပြုပါ
ဤဆီမွှေးသည် ချောင်းဆိုးခြင်းနှင့် အအေးမိခြင်းကို သက်သာစေရန် လူသိများသော်လည်း လက်သည်းမှိုနှင့်ပတ်သက်လာသောအခါတွင် အံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ American Board of Family Medicine ဂျာနယ်တွင် ပါဝင်သည့် လေ့လာမှုတစ်ခုတွင် Vicks Vaporub ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် လက်သည်းကြွပ်ဆတ်မှုကို ပျောက်ကင်းစေပြီး မှိုများကို တိုက်ထုတ်နိုင်ကြောင်း အခိုင်အမာဆိုထားတာ‌ကြောင့် ၎င်းကို လိုအပ်သည့်‌နေရာသို့ တစ်နေ့တစ်ကြိမ် လိမ်းပေးနိုင်ပါတယ်။
3. Tea-tree အဆီ ပွတ်ပေးပါ
၎င်း၏ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော မှိုသတ်နိုင်သော ဂုဏ်သတ္တိများကြောင့် လူသိများသော လက်ဖက်ပင် အဆီသည် လက်သည်းများကို ကျန်းမာသန်စွမ်းစေပါတယ်။ လက်သည်းမှိုပြဿနာရှိပါက ဂွမ်းစဖြင့် လိမ်းပေးခြင်းဖြင့် သုံးနိုင်ပါတယ်
4. သံပုရာရည်နဲ့ baking soda ရောပြီး ပွတ်တိုက်ပေးပါ
အလှပြင်ဆိုင်ကို သွားရန်မလိုပဲ အိမ်တွင်ပင် သင့်လက်သည်းများကို ဖြူစင်စေရန်အတွက် လက်သည်းများကို သံပုရာခြမ်းဖြင့် ပွတ်တိုက်ပါ သို့မဟုတ် ဂွမ်းဖြင့် သုတ်လိမ်းပြီး ၁၀ မိနစ်ကြာ ထားလိုက်ပါ။ ပိုမိုသန့်စင်ရန်အတွက် သံပုရာရည်ကို baking soda နှင့် ရောစပ်ပြီး လက်သည်းများကို သွားတိုက်တံပါးပါးဖြင့် ပွတ်တိုက်ပေးနိုင်ပါတယ်။
မြင်းမြီးပင်သည် ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းများနှင့် ရောင်ရမ်းမှုကို ဆန့်ကျင်သည့် ဂုဏ်သတ္တိများပါရှိကြောင်း သက်သေပြထားပါတယ်။ မြင်းမြီးပင် လက်ဖက်ခြောက် ၂ ခွက်သောက်ခြင်းသည် လက်သည်းများကို သန်မာအောင် ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် မကြာခဏမကွဲအက်စေရန် ရိုးရှင်းပြီး လွယ်ကူသော နည်းလမ်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
6. Oregano ဆီလိမ်းပါ
သင့်အနီးနားရှိ စူပါမားကတ်များတွင် အလွယ်တကူ ရနိုင်ပါတယ်၊၊ လက်ဖက်ပင် အဆီ၏ အခြားရွေးချယ်စရာအဖြစ် လက်သည်းများကို ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် အော်ရီဂါနို ဟုခေါ်သော တောရှူးပင်အဆီ ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယိ။ ဤအဆီတွင် အံ့သြဖွယ်ဘက်တီးရီးယားဆန့်ကျင်ဂုဏ်သတ္တိများရှိကြောင်း သက်သေပြထားသည့် thymol ပါဝင်ပါတယ်။ လက်သည်းမှို သို့မဟုတ် ဘက်တီးရီးယားပြဿနာများ ခံစားရပါက အော်ရီဂနိုဆီတွင် နှစ်ထားသော ဂွမ်းစများဖြင့် သင့်လက်သည်းများကို ညင်သာစွာ ပွတ်ပေးပါ။
7. Biotin ကြွယ်ဝသော အစားအစာများကို စားသုံးပါ
သင့်လက်သည်းများ သန်မာစေရန်အတွက် ဗီတာမင်ဘီ အမျိုးအစားဖြစ်သော Biotin ကြွယ်ဝသော အစားအစာများကို စားသုံးရန် အရေးကြီးပါတယ်။ လေ့လာမှုတစ်ခုအရ ဘိုင်အိုတင်ဟာ အားနည်းသော လက်သည်းများကို ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်း သန်မာသောလက်သည်းများအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးနိုင်ပါတယ်။ ဗီတာမင်အေပါ၀င်တဲ့ အစားအစာတွေကတော့ အခွံမာသီး၊ ပန်းဂေါ်ဖီ၊ ချက်ပြုတ်ထားသော ကြက်ဥ၊ ငှက်ပျောသီးနဲ့ မှိုတို့ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းတို့ကို သင်၏နေ့စဉ်စားသောက်မှုတွင် ထည့်သွင်းစားသောက်ပါ။
8. အုန်းဆီဖြင့် နှိပ်နယ်ပေးပါ။
အုန်းဆီသည် သင့်လက်သည်းများကို အာဟာရဖြစ်စေပြီး အစိုဓာတ်ထိန်းပေးကာ cuticles များကို ကျန်းမာစေပါတယ်။ အုန်းဆီ အနည်းငယ်ယူ၍ လက်သည်းများထဲ ဆိမ့်ဝင်သွားသည်အထိ နှိပ်နယ်ပေးပါ ။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းက သင့်လက်သည်းများကို အနာကျက်စေပြီး သန်မာစေမည်ဖြစ်ပါတယ်။
9. ပန်းသီးရှာလကာရည်နှင့်ရေတွင် စိမ်ပါ
ရောဂါပိုးရှိသော လက်သည်းများကို ကုသရန် ရေနှင့် ပန်းသီးရှာလကာရည် တို့ကို အညီအမျှပြုလုပ်ထားသော ဖျော်ရည်တွင် သင့်လက်သည်းများကို မိနစ် 30 ခန့်စိမ်ထားပါ။ သို့မဟုတ် အမြန်ကုစားရန်အတွက် သင်သည် ရောဂါပိုးရှိသော လက်သည်းများကို ဂွမ်းစဖြင့် သုတ်ကာ ပန်းသီးရှာလကာရည်ကို လိမ်းနိုင်ပါတယ်။
10. ကြက်သွန်ဖြူ သုံးဆောင်ပါ
ကြက်သွန်ဖြူဟာ အသုံးဝင်မှုများပြားလွန်းသလို ခြေသည်းမှိုများကို ပျောက်ကင်းစေခြင်းအတွက်လည်း အလွန်ကောင်းမွန်သောအရာဖြစ်ပါတယ်။ ကြက်သွန်ဖြူ လေးညှင်းပွင့်တွင် အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသော မှိုများကို တားဆီး ပိုးသတ်နိုင်သော ဂုဏ်သတ္တိများ ပါဝင်ပါတယ်။ ကြက်သွန်ဖြူလေးညှင်းပွင့်ကို ထောင်းပြီးနောက် ရောဂါပိုးရှိတဲ့နေရာကို လိမ်းပေးပါ။
လက်သည်းများ အားနည်းခြင်းသည် အရင်းခံ ရောဂါအခြေအနေတစ်ခု၏ လက္ခဏာတစ်ခုလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သင့်ပြဿနာဟာအလှပြင်ပစ္စည်းများကြောင့် မဟုတ်ပါက ဤသဘာဝကုထုံးများကို မစမ်းသပ်မီ ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရန် အကြံပြုအပ်ပါတယ်။
ဤကုထုံးများထဲမှ တစ်ခုခုကို သင်ယခင်က စမ်းသုံးဖူးပါသလား ?? ကြွပ်ဆတ်သော လက်သည်းပြဿနာကို သင်မည်ကဲ့သို့ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပါသလဲ ??
သင့်အိမ်ထဲမှာတင် အလွယ်တကူရှာတွေ့နိုင်တဲ့ သဘာဝမျက်နှာသန့်စင်နည်း ၆ မျိုး